सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्दै बम विस्फोट, के छ अवस्था ? थप जानकारी सहित — Imandarmedia.com
सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्दै बम विस्फोट, के छ अवस्था ? थप जानकारी सहित
काठमाडौ। इटहरी–२ नवजागृति टोलको एक घरमा सामेबार राति साढे १० बजेतिर बम विस्फोट भयो। विस्फोटमा परी इटहरी बस्दै आएका २२ वर्षीय रवीन थापा र उनका साथी लमजुङका २३ वर्षीय शेरजंग गुरुङ घाइते भए।
थापाको कोठामा बस्न आएका गुरुङले ल्याएको सुतली बम पड्किएको प्रहरीको आशंका छ। घाइते दुवै जनालाई प्रहरीले आफ्नो निगरानीमा राखेर उपचार गराइरहेको छ। घटना कसरी भयो, बम कहाँ विस्फोट गराउने योजना थियो।
घटनामा कसको संलग्नता छ भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एक अधिकारीले भने।घटनास्थलबाट प्रहरीले हिमाल सुरक्षा परिषद् र कंग्रुन्ट फ्रन्ट नेपाल कफनको पर्चासमेत बरामद गरेको छ।
कफनको पर्चामा ‘पूर्वाञ्चल डिभिजन प्रमुख’ भनेर बृजकिशोर ठाकुरको नाम र मोबाइल नम्बर राखिएको छ। कसले हाम्रो पर्चा त्यहाँ राख्यो भन्ने जानकारी हामीलाई छैन। हाम्रो पार्टीको बदनाम गराउने उद्देश्यले पर्चा दुरुपयोग भएको हुन सक्छ।
प्रहरीले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउला नि, ठाकुरले भने। प्रहरी स्रोतले पनि यो घटनामा हिमाल सुरक्षा परिषद्को संलग्नता रहेको जनाएको छ।सोमबार राति असावधानीबस’ पड्किएको बम भारतबाट नेपाल ल्याइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
घाइते अवस्थामा रहेका गुरुङले प्रहरीसमक्ष उक्त बम भारतको जोगबनीबाट ल्याएको बताएको स्रोतको भनाइ छ। निश्चित रकम दिने बताएपछि आफूले बम बोकेर ल्याएको उनले प्रहरीलाई बताएका छन्।
इटहरीकै एक चर्चमा राख्न भनेर जंगबहादुर नाम बताउने व्यक्तिले बम बोकाएर पठाएको गुरुङले बताएको एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए। तर, ती व्यक्तिले भनेको चर्च नभेटेपछि बम लिएर आफू थापा बस्ने कोठामा गएको र त्यही बिस्फोट भएको गुरुङले प्रहरीसँग भनेका छन्।
थापाले भने आफूलाई बमबारे कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। गुरुङ आफ्नो कोठामा बस्न आएको र बम नै लिएर आएको भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको थापाले बताएको प्रहरीको भनाइ छ।
एक महनिाअघि मात्रै हिमाल सुरक्षा परिषद्ले सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको थियो। गत फागुन १५ गते सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्न प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा हतियारको तस्बिरसमेत राखेको थियो।
संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, पाँच विकास क्षेत्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने, भारत–चीन सीमा विवाद समाधान गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
एमसीसी सम्झौता खारेज गरिनुपर्नेलगायत माग राखेर यो संगठनले युद्धको घोषणा गरेको हो। हतियारको तस्बिरसहितको विज्ञप्ति मिडियामा पठाउँदै सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्दासमेत सुरक्षा निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन।
संगठित रुपमा आपराधिक गतिविधि गर्नका लागि यो समूह खडा गरिएको नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले विश्लेषण गरेको थियो। विगतको गोरखा जनमुक्ति पार्टी’को नामबाट आपराधिक गतिविधि गर्ने समूहले नै कारागारबाट छुटेपछि नाम परिवर्तन गरी ‘हिमाल सुरक्षा परिषद् राखेर चन्दा आतंक सुरु गरेको ब्यूरोको बुझाइ छ।
चन्दा आतंककै लागि विस्फोटसम्मको योजना बनाएको हुनसक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।हिमाल सुरक्षा परिषद्को कमाण्डर झापाका खगेन्द्र खरेल रहेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार उनी पहिला पनि विस्फोटक पदार्थ ओसारपसारको कसूरमा जेल परेर छुटेका व्यक्ति हुन्। भारतमा बसेर नेपालमा आतंक फैलाउँदै चन्दा असुली गर्ने मुख्य उद्देश्यले हिमाल सुरक्षा परिषद् गठन भएको हो।
विशेष ब्यूरोका एक उच्च अधिकारीले भने, राजनीतिक उद्देश्यले नभइ चन्दा असुलीका लागि यो समूह खडा गरेजस्तो देखिन्छ। किनकि, यसमा संलग्न व्यक्तिहरू धेरैजसोको पृष्ठभूमि राजनैतिकभन्दा पनि आपराधिक छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिले विभिन्न मिति र स्थानबाट पक्राउ गरेका हिमाल सुरक्षा परिषद्का नौ सदस्यलाई गत फागुन ५ मा सार्वजनिक गरेको थियो।
पक्राउ परेकाहरूले चन्दा असुलीका लागि बमजस्तो देखिने शंकास्पद बस्तु (होक्स) राख्दै प्रदेश १ का जिल्लामा आतंक मच्चाएका थिए।हिमाल सुरक्षा परिषद् नेपाल, इन्चार्ज केन्द्रीय कमिटी, इन्चार्ज कोशी अञ्चल कमिटी।
अध्यक्ष कोशी अञ्चल कमिटी, अध्यक्ष मेची अञ्चल कमिटी, इन्चार्ज मेची अञ्चल कमिटीका हस्ताक्षर मात्र भएका छापहरु बरामद भएका थिए। त्यति बेलै यो समूहले बिस्फोट गराउन सक्ने संकेत प्रहरीलाई दिइसकेको थियो।
उनीहरु पक्राउ परेको १० दिनपछि फागुन १५ गते विज्ञप्ति निकाल्दै हिमाल सुरक्षा परिषद्ले सशस्त्र युद्धको घोषणा नै गरेको थियो। यो समूहले विस्फोट गराउन त्यस बेला ट्युबेल गाड्ने मजदुरदेखि मन्दिरका पुजारीसम्मको प्रयोग गरेको थियो।
त्यति बेलाको घटनाका मुख्य योजनाकार झापाको गौरादह नगरपालिका–२ का ३८ वर्षीय सुमन कुमार कार्की थिए। ठेक्कापट्टा गर्दै आएका उनी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा २०७५ वैशाखदेखि २०७७ फागुनसम्म २२ महिना झापा जिल्ला कारागारमा बसेका थिए।
त्यसपछि रिहा भएका उनी हिमाल सुरक्षा परिषद्मा लागेका थिए। प्रहरीका अनुसार उनले विस्फोटको धम्की दिँदै चन्दा असुली गर्ने योजना बनाएका थियो।
कार्की आफू भारतमा बस्थे र पूर्वी नेपालका जिल्लामा आतंक फैलाउँदै आर्थिक संकलन गर्थे। झापा प्रहरीले उनलाई गएको फागुन २ गते नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो।